Muudey: Maxay dowladda wax uga qaban la’dahay Shabaabka ku soo xoogeystay Sh/dhexe? - Idman News
Muudey: Maxay dowladda wax uga qaban la’dahay Shabaabka ku soo xoogeystay Sh/dhexe?
Published on 13th October 2019 by Mohamoud
Xasan C/qaadir Muudey oo la hadlay Warbaahinta gudaha ayaa yiri “Ciidanka Xoogga Dalka oo fulinaya amarka Madaxda Qaranka waxay hawlgalo saf ballaaran ka bilaabeen qaybo ka mid ah Gobolka Shabellaha Hoose, inkastoo ay ku guuleysteen inay Shabaab ka saaraan qaybahaasi, hadana Shabaabkii laga soo saaray Gobolka Shabellaha Hoose waxay u soo wareegeen Gobolka Shabellaha Dhexe, waxayna ka wadaan dhibaato baahsan.”
“Waad aragtaan in maleeshiyada Al Shabaab ay maalin kasta qarax iyo arbushaad ay ka wadaan Gobolka Shabellaha Dhexe, iyagoo ku dhibaateenaya shacabka, Saraakiisha Ciidamada iyo Masuuliyiinta Dowlad Goboleedka Hirshabelle. Waxay jareen wadooyinka, maanta la isuguma socon karo Jowhar & Balcad, Balcad illaa iyo Muqdisho.” Ayuu yiri La taliyaha Warbaahinta ee Madaxweynaha Hirshabelle.
Isagoo hadalkiisa wata ayuu yiri “Waxaa la rabay in Dowladda Somaliya ku fekerto haddii Al Shabaab laga soo saaro Gobolka Shabellaha Hoose inay soo aadi karaan Gobolka Shabellaha Dhexe, maadaama ay Labada Shabelle soohdin wadaag yihiin.”
“Bishii la soo dhaafay ee September Madaxweynaha Hirshabelle, Mudane Maxamed Cabdi Waare waxa uu Dowladda Federaalka ugu baaqay inay wax ka qabato Shabaabka u soo guuray Gobolka Shabellaha Dhexe, illaa iyo hadana waxba kama qaban, oo maalin kasta falal amniga lid ku ah ayay ka wadaan.” Ayuu yiri Xasan C/qaadir.
Waxa kaloo uu yiri “Dowlad Goboleedka Hirshabelle iyo shacabkeedaba waxay is weydiinayan maxay Dowladda Federaalka wax uga qaban la’dahay Masuuliyiinta, Saraakiisha Ciidamada iyo rayidka ee maalin kasta lagu bartilmaameedsanayo gobolkan.”
Waxaa uu intaa ku daray “Markasta waxaan ku taameynaa maxay dowladda wax uga qaban la’dahay Shabaabka ku soo xoogeystay Gobolka Shabellaha Dhexe? Madaxda Qaranka hala iga gaarsiiyo Gobolka Shabellaha Dhexe oo xasiloon inay lamid tahay Gobolka Banaadir oo degan. Gobolka Shabellaha Dhexe oo qasana ay la macno tahay Gobolka Banaadir oo amni ka jirin.”
“Ugu dambeen waxaan leeyahay Madaxda Qaranka xaaladda ka jirta Gobolka Shabellaha Dhexe way mooday xilligii indhaha laga fiirsan lahaa, waxayna u baahan tahay in shacab iyo qaranba si wadajir ah wax looga qabto. Masuuliyiinta iyo Saraakiisha qiimaha u leh dalka iyo dadka Soomaaliyeed waa inuusan dhiigooda noqon mid aan qiimo ku fadhin. Caqliga wanaagsan ayaa dhigaya in laga wada dhiidhiyo oo dhiig joojin loo helaa dhiigaasi uu cadowgu daadinayo.” Ayuu yiri Muudey.
Muuqaalo: Somaliland oo ka hadashay go’aankii ay DFS xiriirka ugu jartay dalka Guinea
Xoghayaha Xisbiga MIDQARAN Xasan Sh Axmed oo ka sheekeeyay ujeedka xisbiga loo aas-aasay
Wafdi uu hogaminaya gudomiyaha barlamanka maamulka hirshabelle ayaa garay magalada baladweyn ee casi
Previous Previous post: Warsidaha Dayniile Halkaan ka Daawo Ra iisal wasaare Kheyre oo maalinta Calanka qudbad Caawa ka Jeediyey Taalada Dhagaxtuur
Next Next post: Toban ka mida Ciidamada Kenya oo qarax ku dhintay (SAWIRRO)